Ka fogow Walwalka Khamriga. Noqo mid faraxsan oo cab Bordeaux Les Legendes
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Khamriga & Ruuxa » Ka fogow Walwalka Khamriga. Noqo mid faraxsan oo cab Bordeaux Les Legendes
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Wararka Faransiiska • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Khamriga & Ruuxa
Noqo mid faraxsan. Cab Bordeaux
Maaha wax la yaab leh in khamrigu ku jiro midabyo kala duwan - laga bilaabo sida biyo oo kale, ilaa qoto dheer, mugdi ah iyo sida caleenta sida maro jilicsan oo xariir ah. Sidoo kale lama yaabin in khamriga Bordeaux uu ka mid yahay kuwa ugu caansan koonka.
Gobolka Bordeaux waa gobolka ugu weyn ee soo saara khamriga ee Faransiiska waxaana ku jira 280,000 hektar oo canab ah iyo 60 Appellations d'Origine Controlees (AOCs).
Sameynta khamriga ee qaybta koonfur -galbeed ee Faransiiska waxay bilaabatay markii Roomaanku yimid (ka fikir qarnigii koobaad).
In kasta oo aagga lagu ammaanay khamriyadiisa cas, haddana waxaa xiiso leh in la ogaado in sumcaddani ay tahay mid dhowaan la helay.
Taariikh ahaan, gobolka Bordeaux wuxuu ahaa mid la jecel yahay (inta badan) khamriyadiisa cad oo leh kuwa khamriga sameeya oo 80 % beerahooda canabka ah u huray Sauternes, Barsac, Bordeaux Blanc iyo Qabuuraha.
Waxay ahayd ilaa 1700 -kii khamriga cas ee Bordeaux xiisaynaya suuqa iyo kuwa xiiseeya khamriga Ingiriiska ayaa isku duubay khamriga cas ee Bordeaux oo ka yimid Graves waxayna u bixiyeen Claret (klairette). Markii kuwa khamri -cabbiyeyaasha ahi ay ogaadeen kor u kaca iibsiga khamriga cas, waxay bilaabeen inay ka gudbaan caddaanka una gudbaan wax soo saarka khamriga cas. Isbeddelku wuxuu si rasmi ah u noqday Kala-soociddii 1855-kii taas oo lagu aqoonsaday soo-saarayaasha ugu wanaagsan ee gobolka, iyaga oo ku qiimeeyay 1-5. Kala -soocidda waligeed lama beddelin (hal mar mooyee) in kastoo ay jiraan khamriyo kale oo aad u badan.
Si loo caddeeyo sida aagga loogu jecel yahay samaynta khamriga, tixgeli xaqiiqda ah in gobolku taageerayo 6100 milkiileyaasha chateaux iyo beeraleyda kale ee soo saara 650 milyan oo dhalo oo khamri ah (2019). Xilliga canabka ah ee 2019 waxaa ku jiray boqolkiiba 85.2 casaan ah; Boqolkiiba 4.4 ayaa kacay; 9.2 boqolkiiba qalalan cad, iyo 1.2 boqolkiiba cad macaan.
Bordeaux waa shaqo -bixiyaha ugu weyn ee ku -tallaalidda dhaqanka iyo warshadaha khamriga, oo bixiya in ka badan 55,000 shaqooyin toos ah iyo kuwo aan toos ahayn. Saddex ka mid ah 4 -tii dhul -beereed ee gobolkuba waxay beeraan canab, guud ahaanna waxaa jira 5,6000 oo khamri -sameeye ah oo soo saara khamriga AOC. Boqolkiiba 56 ka mid ah waa meherado qoysku leeyahay, oo celcelis ahaan cabbirka beerta canabka ah oo ah 19.6ha oo leh beero canabyada ugu waaweyn Entre deux Mers iyo Medoc. Qiyaastii 5 boqolkiiba guud ahaan dusha beerta canabka ah ee Bordeaux waxaa iska leh hantiyo kala duwan oo ku yaal bangiyada Bidix iyo Midig (winescholarguild.org).
Gobolka dhexdiisa, milkiilayaasha chateaux waxay caadiyan ku iibiyaan canabkooda iyada oo loo marayo qof aan u dhalan oo u dhaqma sidii qof dhexe iyadoo iibsanaysa qoondayntooda canabka iyo iibinta / qaybinta khamriga soo baxay. Khamriga laga soo saaray gobolka Bordeaux, boqolkiiba 58 waxaa lagu iibiyaa gudaha Faransiiska iyadoo boqolkiiba 43 ee soo hartay laga dhoofiyo adduunka oo dhan.
Ma aha Siyaasad. Juqraafi: Bidix, Midig, Dhexe
Gobolka Bordeaux waxaa u qaybiyay juqraafi ahaan Gironde estuary Bangiga Bidix, Bangiga Midig iyo Entre-Deux-Mer (aagga u dhexeeya Gironde Estuary iyo Wabiga Dordogne).
Baanka Bidix. Kuwii khamriga jeclaa waxay helayaan Medoc, Qabuuro iyo Sauternais (argagaxyada ugu fiican - ku -saleysan quruurux)
• Medoc wuxuu leeyahay Cabernet Sauvignon; canabku wuxuu ka baxaa isku dar ah carrada dhoobada ah iyo barxadaha quruurux ee alluvial.
• Qabuuraha waxaa ka muuqda Cabernet Sauvignon; carro jajab ah oo ay ugu wacan tahay waxqabadkii barafka ee taariikhiga ahaa.
• Sauternais wuxuu leeyahay Sauternes (khamri cad oo macaan); carro jajab ah oo aad u xoog badan kaas oo awood u siinaya dheecaan, ka hortagaya canabku inay yeeshaan biyo aad u badan.
Bangiga Midig. Kuwii khamriga jeclaa waxay helaan Libournais, Balye iyo Bourg (carrada ay ku badan yihiin dhoobada iyo nuuradda)
• Libournais waxay leedahay Saint-Emilion, Montagne, Pomerol, Fronsac, Cotes de Castillon; inta badan dhagaxa nuuradda, bacaadka iyo ciidda dhoobada ah.
• Balye wuxuu leeyahay Merlot, Cabernet Sauvignon iyo Cabernet Franc; inta badan dhoobada ciidda nuuradda.
• Bourg waxaa ka muuqda Malbec, Sauvignon Blanc, Muscadelle, iyo Semillon iyo weliba Colombard iyo Ungi; ciid, dhoobo, jayga iyo carrada dhagaxa ah.
Entre-Deux-Mers (kaliya khamriga cad ayaa qaada racfaanka AOC); Cadillac, Loupiac, Sainte-Croix-du Mont
• Cadillac (oo caan ku ah khamriga cad ee botrytized macaan) waxaa ku jira Semillon, Sauvignon Blanc iyo Sauvignon Gris; carro jaalle ah oo jajab ah.
• Loupiac waxaa ku jira Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle iyo Sauvignon Gris; dhoobo, ciid nuurad ah oo ka kooban quruurux iyo dhoobo.
• Sante-Croix-du Mont waxaa ka muuqda Semillon, Muscadelle, iyo Sauvignon; dhoobo, ciid nuurad ah.
Khamriga cad ee Bordeaux waxaa badiyaa lagu sameeyaa Sauvignon Blanc iyo Semillon waxaana lagu tilmaamaa inay yihiin kuwo firfircoon oo cusub (Entre-Deux-Mers) oo jilicsan iyo liin-u-eg (Pessac-Leognan).
Khamriga cas ee ka yimid Bordeaux caadi ahaan waa jidh dhexdhexaad ah oo leh udugga currants madow, plomme iyo dhulka ama quruurux qoyan. Dusha sare, astaanta dhadhanka waxaa ka mid ah macdanta, miro iyo uunsi, oo bixisa tannins badan (u wanaagsan gabowga).
Guduudka Bordeaux badanaa waa isku dhafan oo leh sumado tilmaamaya racfaanka khamriga halkii uu ka ahaan lahaa noocyada canabka ee gaarka ah. Noocyada cad waxay ka kooban yihiin boqolkii ka hadhay boqolkii canab ee la beeray, iyadoo 100 boqolkiiba Sauvignon Blanc iyo Semillon leh boqolkiiba Muscadelle iyo caddaan kale.
Geedo canab ah oo lagu beeray gobolka, 89 boqolkiiba waa noocyo cas, 59 boqolkiiba Merlot, 19 boqolkiiba Cabernet Sauvignon, 8 boqolkiiba Cabernet Franc iyo boqolkiiba ugu dambeeya waxaa ka mid ah Petit Verdot, Malbec ama Carmenere.
Hadday Cimiladu tahay
Canabyada Bordeaux waxay ku raaxaystaan ​​kulayl dheer oo diiran, guga qoyan iyo dayrta, oo ay raacaan jiilaal dhexdhexaad ah. La Foret des Landes, kaymo weyn oo geedo geed ah, ayaa ka ilaaliya gobolka Bordeaux saamaynta cimilada badda ee Badweynta Atlantic; si kastaba ha ahaatee, isbeddelka cimiladu wuxuu saamayn ku yeelanayaa gobolka wuxuuna saameynayaa wax -soo -saarka. Institut National de l'origine et de la Qualite (INAO), oo ah qayb ka mid ah Wasaaradda Beeraha ee Faransiiska, ayaa toban sano ku qaadatay baadhitaanka isbeddelka cimilada. Saynisyahannada khamriga iyo beeraleyda ee Bordeaux waxay si dhab ah u tixgeliyaan saamaynta kuleylka adduunka oo dhowaan la ansixiyay noocyo cusub oo si fiican ugu habboon si loo yareeyo buufiska biyaha ee la xiriira kororka heerkulka iyo wareegyada koraya ee gaagaaban.
Bishii Juun, 2019, Ururrada Bordeaux iyo Bordeaux Superieur waxay oggolaadeen ku-daridda toddoba cudur oo cusub iyo noocyo canab kuleylka u adkaysta tanina waxay u taagan tahay wax-ka-beddelkii ugu horreeyay ee 13 nooc oo gobolkii asalka ahaa tan iyo 1935. Toddobada nooc ee cusub ee la oggolaaday waxaa ka mid ah casaan (Marselan, Touriga Nacional, Castets, Arinarnoa), iyo caddaan (Alvarinho, iyo Lilorila) oo leh beero ugu horreeya ee noocyo cusub oo la qorsheeyay sannadkan. Noocyada cusub waxay ku kooban yihiin 5 boqolkiiba aagga beerta canabka ah ee la beeray mana xisaabi karaan in ka badan 10 boqolkiiba isku darka ugu dambeeya ee midab kasta oo la siiyay.
Bordeaux waxay soo bandhigtay dhaqano kale oo cilmiyaysan iyo wax -soo -saarka beeraha si wax looga qabto isbeddelka cimilada oo ay ka mid yihiin: la -qabsiga hab -dhaqanka ugu habboon baahiyaha canab -kasta - goynta daahday, kordhinta dhererka jirridda canabka si loo yareeyo aagga caleen; xaddidaya caleenta caleenta si looga ilaaliyo canabka qorraxda; la qabsashada goobaha dheriga si loo yareeyo buufiska biyaha (si joogto ah ama xilliyeedba waxaa ka dhergay biyo taasoo keentay xaalad anaerobic ah); goosashada habeenkii iyo yaraynta cufnaanta dhirta.
In ka badan 65 boqolkiiba beeraha canabka ah ee Bordeaux waa deegaan la aqoonsan yahay (halbeeg cusub oo gobolka ah). Bordeaux waxay hogaamisaa dhammaan AOP -yada Faransiiska mugga Shahaadooyinka Qiimaha Bay'adda Sare (HVE) ee khamriga, iyagoo gaadhay heerkii ugu sarreeyey ee shahaadadii waarta ee Faransiiska iyo boqolkiiba 30 korodhka beeraha dabiiciga ah.
Kuwa khamriga sameeya ee Bordeaux waxay wadaagaan aragti wadajir ah iyo ballanqaad si ay si firfircoon uga hadlaan isbeddelka cimilada iyagoo ilaalinaya ilaha biyaha iyo tamarta oo gabaabsi ah; ilaalinta hab -nololeedka nugul; iyo taageerida kala duwanaanta noolaha laga bilaabo dhaqanka ugu fiican ee canabka ilaa baakadaha kale. Ballan -qaadka joogtaynta waxaa ka mid ah fiiro gaar ah si kor loogu qaado badbaadada shaqaalaha, ku qanacsanaanta shaqada iyo tababarka iyo horumarinta/tababarka jiilalka hadda iyo kuwa soo socda.
Muhiimadda Wine Chateau ee Bordeaux
Domaines Barons de Rothschild (Lafite) Les Legendes Waxay Sameeyaan Khamri Wanaagsan
Taariikhda khamriga ee Lafite iyo Latour waxay socotaa qarniyo. Markii ugu horraysay ee magaca Lafite uu soo muuqdo wuxuu bilaabmay qarnigii 13aad (1234) markii la xusay Gombaud de Lafite, oo ahaa abbot ka mid ahaa Kaniisadda Vertheuil (waqooyiga Pauillac). Magaca Lafite wuxuu ka yimid ereyga luqadda Gascon “la hite” ama hillock.
Waxaa loo malaynayaa in beero canab ah ay hoy u ahaayeen markii qoyska Segur ay abaabuleen beertii canabka qarnigii 17 -aad Lafite -na wuxuu bilaabay in loo yaqaan dhul -khamri weyn. Qarnigii 18aad Lafite wuxuu bilaabay inuu sahamiyo suuqa London waxaana lagu xusay London Gazette (1707) isagoo sharaxaya khamriga sida qaylada cusub ee Faransiiska. Robert Walpole, Ra'iisul Wasaaraha, wuxuu iibsaday fuustada Lafite saddexdii biloodba mar. Xiisaha Faransiiska ee khamriga Bordeaux ma uusan bilaaban ilaa sanado badan kadib markii la raacay raadkii Ingiriiska.
Intii lagu jiray qarnigii 18aad Marquis Nicolas Alexandre de Segur wuxuu hagaajiyay farsamooyinka khamriga wuxuuna sare u qaaday sharafta khamriga wanaagsan ee suuqyada shisheeye iyo gaar ahaan Maxkamadda Versailles. Loo yaqaan "Amiirka Khamriga," Lafite wuxuu noqday Khamriga Boqortooyada isagoo taageero ka helaya safiir karti leh, Marechal de Richelieu. Markii Richelieu loo magacaabay Guddoomiyaha Guyenne, wuxuu la tashaday takhtar Bordeaux ah oo kula taliyay in Chateau Lafite uu ahaa, “ugu fiicnaa uguna fiicnaa dhammaan tonicyada.” Markii Richeliu ku laabtay Paris, Louis XV ayaa ku yidhi, "Marechal, waxaad u eegtaa shan iyo labaatan sano ka yar sidii aad ahayd markaad tagtay Guyenne." Richeliu wuxuu ku andacooday inuu helay Ilaha Dhallinta oo leh khamri Chateau Lafite kaas oo ah, “macaan, deeqsi, naxariis badan, oo la barbar dhigi karo ambrosia ee Ilaaha Olympus.”
Lafite wuxuu lahaa sumcad aad u wanaagsan Versailles wuxuuna helay oggolaanshaha Boqorka. Qof walba hadda wuxuu rabay khamriga Lafite waxayna Madame de Pompadour ku soo bandhigtay soo dhaweynteeda cashada Madame du Barry waxay si gaar ah ugu adeegtay Khamriga Boqorka.
Khamriga qaaliga ah ee Bordeaux ee aristocracy -ka Faransiiska (Domaines Barons de Rothschild/Lafite) ayaa noo diyaar ah iyada oo loo marayo astaanta Legende.
1. Legende Medoc 2018. 50 boqolkiiba Merlot, 40 boqolkiiba Cabernet Sauvignon, 10 boqolkiiba Petit Verdot. Qeyb ka mid ah geedaha geedka muddo 8 bilood ah oo bixinaya qoraallada vanilj iyo hoosta qiiqa.
Indhuhu waxay ku faraxsan yihiin midabka cas ee aadka u daran halka sanka lagu maaweelinayo udgoonka geesinimada leh ee udugga macaan, miraha cas, isku darka macaan, qadhaadh, cusbada iyo dhanaan . Dhadhanku wuxuu ku sii jeedaa dhabannada isagoo soo bandhigaya waayo -aragnimo ah mid deg -deg ah oo dhadhan fiican leh oo gaarsiinaysa dhammaystirka. Ku lammaan hilibka lo'da, wan, ugaadhsiga, ama digaagga.
2. Legende R Paulillac 2017. 70 boqolkiiba Cabernet Sauvignon, 30 boqolkiiba Merlot. Boqolkiiba lixdan ayaa ku jira geedkii Faransiiska muddo 12 bilood ah.
Aragtida ugu horreysa ee khamrigan guduudan ee qoto dheer oo leh tilmaamo madow waxay soo jeedinaysaa inay noqon doonto mid casri ah oo miyir leh. Sanka ayaa ogaanaya bouquet wanaagsan oo udgoon, macaanka raspberry, vanilj iyo dhagaxaanta si farxad leh isugu jira. Isaga oo isku kalsoon oo dhabannada ku jira, waxay soo gudbisaa raadadka miro madow, qumbaha, iyo vanilj oo leh tannins la huwiyey. Kani waa khamri jidh buuxa leh oo sameeya hadal geesinimo leh. Ku lammaan hilibka lo'da, fuud, jiiska bisil sida Comte iyo Saint Netaire.
3. Legende Saint-Emilion 2016. 95 boqolkiiba Merlot, 5 boqolkiiba Cabernet Franc (oo ka soo jeeda xaafadda Libourne). Boqolkiiba afartan ayaa ku jira foostooyinka geedkii Faransiiska.
Fiirinta koowaad ee khamrigan waxay soo bandhigaysaa midab casaan ah oo cherry madow ah. Sanka ayaa faraxsan marka uu helo liisanka, tubaakada, jeeriga, geedaha qoryaha iyo tubaakada. Dhadhanka waxaa lagu abaalmariyaa talooyinka mocha, geedo yaryar, dhagxaan, cadar, alwaax duug ah iyo qaab dhismeed tannin hodan ah. Ku lammaan duck ama terrine game iyo jelly quince, garabka wan oo lagu dubay rosemary ama thyme, pizza iyo napolitana baastada ama lasagna.
4. Legende R Bordeaux Rouge 2018. 60 boqolkiiba Cabernet Sauvignon, 40 boqolkiiba Merlot.
Da'day 9 bilood oo ku jiray weel shub ah iyo 60 boqolkiiba isku -darka kama dambaysta ah ee ku jira foostooyinka.
Crimson oo isha ku leh miro guduudan iyo blackberries, liisanka iyo uunsi macaan oo sanka khiyaaneeya, gaar ahaan aad u jecel sida urta mocha iyo rooti ka soo baxa foostada gabowga ee khibradda. Midho cusub oo miro dharaar leh, dhammaadku waa midho macaan. Ku lammaan risotto maraqa hilibka, baastada Bolognese, ham iyo salami.
5. Legende R Bordeaux Blanc 2020. 70 boqolkiiba Sauvignon Blanc, 30 boqolkiiba Semillon.
Ishu waxay ku faraxsan tahay jaalaha dahabka ah ee dhaldhalaalka leh ee cawska leh. Sanka waxaa lagu abaalmariyaa talooyin ku saabsan miro kulaylaha ah iyo tilmaamo macdan ah. Dhadhanka waxaa lagu sasabaa dhadhan wareegsan oo leh jidh buuxa oo u horseedaya dhanaan liin leh oo dhammaystiran. Ku lammaan cuntada badda, oysters ceeriin ah, wax kasta oo leh maraqa Bearnaise iyo salad cagaaran (labiska aan khalka ahayn).